​बन्द गरौं, डा. केसीको ज्यानको सौदाबाजी
२७ अषाढ २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । डा. गोविन्द केसी आफैंमा निष्ठा र इमानका पर्याय हुन् । उनमा त्यस्तो नदेख्नेहरूसँग निहित स्वार्थ होला या डा. केसीको पक्षमा उभिएकासँग रिसराग । यही कारण मात्रै अर्कैका लागि डा. केसीमा खोट देखिएला, यो बेग्लै कुरा हो । उमेरले पाका, अविवाहित र आफ्नो कमाइ पनि आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न नसक्ने नेपालीका लागि खर्च गर्ने यिनै डाक्टर केसी आठौ पटक आमरण अनसनमा छन्… विस्तृत समाचार
डीएनए परीक्षणलाई प्रमाण नमान्ने फैसला विवादमा
२३ अषाढ २०७३
काठमाडौं, २३ असार । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका अयोधी यादवको सुनुवाई शुक्रबार गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकी सुशीला कार्कीको आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । उजुरी सुनुवाइ समितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवविरुद्ध २ वटा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्की विरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । सुनुवाइ समितिले उजुरी गोप्य नै राखेको छ । उजुरीको संख्या बताए पनि उजुरीको… विस्तृत समाचार
​‘ब्ल्याकमेलर’ भर्सेज ‘मानसिक–रोगी’
मुलुकमा यतिबेला फेरि एकपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की चर्चाको तातो तावामा छन् । केही समयअघि साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेर चर्चामा तानिएका कार्की अहिले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीसँग पौठेजोरी खेलेर चर्चामा आएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा लोकमान भर्सेज डा. गोविन्द केसी भाइरल भैरहेकै बेला अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएर यसमा केही ब्रेक त लगाइदिएका छन् ।… विस्तृत समाचार
अर्थात्, काले काले मिलेर खाउँ भाले
७ अषाढ २०७३
यतिबेला मुलुकमा कमाउे हैन, लुट्ने रेस चलेको छ । यो रेसमा सहभागी सबै नांगै भएर लागेकाले अब एकआपसमा लाज लाग्ने स्थिति नै छैन । सबै नांगिएपछि कसैलाई लाज हुने कुरै भएन । पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाको निराशाको अभिव्यक्ति हो यो । उनी उच्चपदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने नाममा चलाइएको राष्ट्रिय लूटतन्त्रका बारेमा एउटा टेलिभिजन च्यानलसँगको कुराकानीमा यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । हाम्रो मुलुक जुन… विस्तृत समाचार
वाद हैन मुद्दा : बाबुराम तरंग
डा. प्रदीप भट्टराई । मुलुक यतिबेला बाबुराममय बनेको छ । गाउँघरका चियापसल र चौताराहरुमा मात्र हैन, सहरका रेष्टुराँ र क्याफेहरुमा पनि उनकै चर्चा छ । रियल वल्र्डमा मात्र हैन, भर्चुअल वल्र्डमा पनि बाबुराम छाएका छन् । सञ्चार माध्यममा पेड होस् वा ननपेड, मिडियाको अन्तरवस्तु नै बनेका छन् बाबुराम । वर्ड अफ माउथमा मात्र हैन, भाइरल नै बनेका छन् बाबुराम । चर्चामा रहनुको मूल कारण उनले एमाओवादी… विस्तृत समाचार
आस्थाको चिहानमा निष्ठाका कुरा
डा. प्रदीप भट्टराई । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दृष्टि अनलाइनको शुभारम्भ गर्दा निष्ठाको पत्रकारिताका बारेमा लामै भाषण गरे । मिसन पत्रकारिता होस् वा व्यावसायिक, निष्ठा बिनाको पत्रकारिताले कसैको पनि हित नहुने उनको भनाइ थियो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भौतिकरूपमा यो मेरो पहिलो देखभेट थियो । र, भौतिक रूपमा उपस्थित भएर उनको भाषण सुन्ने पनि यो पहिलो मौका जुरेको थियो । शायद… विस्तृत समाचार
फ्लो र कन्ट्राफ्लोको मझधारमा प्रधानमन्त्रीका सपना
समाचारको संसारमा फ्लो र कन्ट्राफ्लो हुन्छ । धेरैजसो ठूला मान्छे, ठूला घटना र अनौठा क्रियाकलापले नै समाचार बनाउँछन्, त्यो समाचारको फ्लो हो । तर, यदाकदा समाचार नबनाउनेहरूले पनि समाचार बनाइ दिन्छन्, त्यो कन्ट्राफ्लो हो । समाचारको फ्लोलाई रोक्ने यो एउटा उपाय पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । सधैंभरी ठूला मान्छे, ठूला घटना र अनौठा क्रियाकलापले मात्र समाचार बनाउँदैनन्, यदाकदा छायाँमा रहेका… विस्तृत समाचार